ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူအရည်အတွက် : 1151 Home
Welcome to www.topinvestmyanmar.com
TOP INVESTMYANMAR ၀ဘ်ဆိုက်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့်
မှ တည်ထောင်လွှင့်တင်ထားသော Online လုပ်ငန်းအမျိုးအစား Top Invest Myanmar Private Website ဖြစ်သည် လုပ်ငန်းများ
ငွေကြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကျိုးတူပူးပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်းဖြင့် အတူတကွ အကျိုးအမြတ်များရရှိစေရေးကို
အဓိကရည်ရွယ်ထားသော ဆိုက်လည်းဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော စီပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်
၊ Online Forex Trading လုပ်ငန်း(Forex - ငွေကြေးလဲလှယ်ကုန်သွယ်သည့်လုပ်ငန်း)၊ Shopping လုပ်ငန်း များစွာတို့တွင် အတူတကွ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းဖြင့် ခိုင်မာသော အကျိုးအမြတ်များကို ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာမှာ မိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ပမာဏဖြစ်သော $20 (မြန်မာငွေဖြင့်ထည့်သူများအတွက် 1$ = ၁၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး 20$=၂ သောင်းကျပ်) မှစတင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပေသည်။ မြန်မာငွေဖြင့် ထည့်သွင်းသူအား မြန်မာငွေဖြင့်ပင် ပြန်လည် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာဖြင့်ထည့်သွင်းသူများအား ဒေါ်လာဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သော စနစ်များမှာ -
၁။ Digital Currency ဖြစ်သော Perfectmoney USD dollar (၀ဘ်ဆိုက်အတွင်း တိုက်ရိုက် ငွေထည့်သွင်းရန် စနစ်ပါရှိပြီးဖြစ်သည်)
၂။မြန်မာငွေကြေး CB Bank Saving Account , CB mobile Banking | KBZ Bank , MOB Bank များ မှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပေသည်။ (ပြင်ပငွေသွင်းစနစ်ဖြင့်သွင်းနိုင်ပေသည်)
Investment Plan များ အထက်တွင်ဖော်ပြထားတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှိ Plan ၃ မျိုးတွင် မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ရင်းနှီးထည့်ဝင်မှုများလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ PLAN A အနည်းဆုံး $20 မှစတင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှိုင်သည် အများဆုံး 200$ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်
ဥပမာအားဖြင့် 20$ ထည့်ဝင်မည့်သူ၏ 20$ မှစရင်းနှီးထည့်ဝင်သူသည်1.1%နှုန်းဖြင့်တစ်ရက်လျှင် 0.22$ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရက် ၁၁၀ ပြည့်လျှင် 24.2$ ကျပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 200$ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက တစ်ရက်လျှင် 2.2$ ပုံမှန်ရရှိ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရက်ပေါင်း ၁၁၀ ပြည့်လျှင် 242$ ရရှိမည်ဖြစ်သည်
(Register လုပ်ပြီးပါက ငွေမထည့်မီ မိမိရရှိမည့် အမြတ်ပမာဏအား လွယ်ကူတွက်ချက်နိုင်ရန် ဆိုက်အတွင်း Investment Calculator ပါရှိပါသည် )
အနည်းဆုံး $201 မှ စတင် ထည့်ဝင်နိုင်ပြီး အများဆုံး $1500 အထိ ထည့်ဝင်နိုင်သည် ဥပမာအားဖြင့် 201$ ရင်းသူသည် 1.3% နှုးန်ဖြင့်တစ်ရက်လျှင် 2.613$ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရက် ၁၁၀ ပြည့်လျှင် $287.43ရရှိပါမည် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး $1500 ၁၅ သိန်းရင်းသူမှာ တစ်ရက်လျှင် 19.5$ ရမည်ဖြစ်ပြီး ရက် ၁၁၀ ပြည့်လျှင် $2145 ရရှိမည်ဖြစ်ပေသည်။
အနည်းဆုံး $1501 မှ အကန့်အသတ်မရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် 1501 ရင်းနှီးထည့်ဝင်သူသည် 1.4% အား ရက် ၁၁၀ လုံးရရှိမည်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ရက်လျှင် 21.014$ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရက် ၁၁၀ ပြည့်လျှင် 2311.54$ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်
(Register လုပ်ပြီးပါက ငွေမထည့်မီ မိမိရရှိမည့် အမြတ်ပမာဏအား လွယ်ကူတွက်ချက်နိုင်ရန် ဆိုက်အတွင်း Investment Calculator ပါရှိသည် )
မှတ်ချက် ။ ။လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှုန်းများအပေါ်မူတည်ပြီး အမြတ်အတိုး Plan များ အပြောင်းအလဲ အစဉ် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမြတ်ငွေ ထုတ်ယူနိုင်နည်း ၀ဘ်ဆိုက်တွင်းရှိ Withdraw (ငွေထုတ်ယူရန်) ကိုနှိပ်၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေထုတ်ယူခွင့်တောင်းခံခြင်း (Withdraw Request) ပြုလုပ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ငွေများအား ဘဏ်နှင့် USD account များသို့လွှဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ် အနည်းဆုံး မြန်မာငွေ ၅၀၀၀ ကျပ်မှ စတင် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည် )
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ဖုန်း- 09783369064
Viber No +959783369064 Facebook Address- Facebook Page of TIM ( လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် Like လုပ်ပြီး ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများအား အစဉ်ရယူနိုင်ပါသည် )
(USD Dollar (Perfectmoney စနစ်ဖြင့် ငွေသွင်းလိုသူများအနေဖြင့် ယခုဆိုက်တွင် Register လုပ်ပြီး ငွေသွင်းနိုင်ပါပြီ)
. www.topinvestmyanmar.com. .......